A few drinking water processing companies in South Korea have expressed interest to import water from mountains of Nepal. Subas Bhandari, president of Nepal Bottled Water Industries Association, says the Korean companies showed their interest in their meeting withadelegation of Nepali industrialists recently. They asked about legal provisions in Nepal about export of glacier water onabu ...
८ साउन, काठमाडौं । झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ! मुलुकको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वार्षिक रु साढे अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्छ । तर यो कुरा साँचो हो, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न मुलुकबाट छ अर्ब ६० करोड ६१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा ...
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । बाणिज्य बैंकले सानो पद देखि ठुलो पदसम्म धेरै संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो । बैंकले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार आवेदन भर्नको अनलाइन मार्फत भर्नुपर्ने छ । विभिन्न पदमा गरी ५ सय ७१ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । बैंकले ४ तहदेखि १० तहसम्म आवेदन मागेको हो । सबैभन्दा बढी २४६ जना आवेदन ४ तहको प्रशासनको लागि मागेको छ । बै ...
साउन २७, २०७४ काठमाडौँ: व्यवस्थापिका संसदले श्रम ऐन, २०७३ पारित गरेको छ। शुक्रबार श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले श्रम ऐन, २०७३ पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। सरकार, उद्योगी र ट्रेड युनियहरूबीचको आपसी समन्वयबाट श्रम ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको थियो। संसदबाट पास भएसँगै यो ऐन अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा ...
वैदशिक रोजगारीका लागि कतार गएका एक युवकको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि मृतक परिवारले जीवन बीमा बापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । कतारमा रहेको नेपाली दुतावासको सहयोगमा मृतक परिवारले जिवन बीमा बापतको ९० लाख १७ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ रकम प्राप्त गरेका हुन् । मृतक परिवारले पाएको रकम युवा कार्यरत कम्पनीले जिवन विमा बापतको रकम उपलब्ध गराएको हो । बुधवार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिं ...
सरकारले विभिन्न श्रम गन्तब्य मुलुकमा रिक्त श्रम सहचारीर काउन्सिलर नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । त्यसमा आवेदन दिन चालक अनुमतिपत्र र टोफेल-आइइएलटीएस उत्तीर्ण हुनैपर्ने छ । मलेसिया, दक्षिण कोरिया, साउदी अरबको जेद्दाह, युएई, कुवेत र ओमनका लागि मन्त्रालयले श्रम सहचारी र काउन्सिलरको पदमा दरखास्त मागेको हो । यी मुलुकहरुमा अहिले श्रम स ...
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बैंक खाता अनिवार्
अब बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने भएको छ । साथै विदेशमा कमाएको रकम त्यही खातामा पठाउनु पर्नेछ । संसदमा बजेट प्र्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार यो खातामा नै रकम पठाउनु पर्नेछ । साथै विदेशमा कमाएको रकमलाई रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी ग ...
दश वर्षभित्र दश लाख रोजगारी !
औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी १० वर्षभित्र उद्योग क्षेत्रबाट १० लाख व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले यहाँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग आज आयोजना गरेको छलफलमा स्वदेशभित्र रोजगारीका विविध अवसर जुटाउन सो योजना सार्वजनिक गरेको हो । दश वर्षभित्र नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जानै नपर्ने ग ...
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले जान्नैपर्ने कुरा
आजभोली कामको शिलशिलामा विदेश जानेहरुको लहर बढ्दो छ । कतिपय मानिसहरु एकअर्काको सिको गर्दै केही नबुझी विदेश जाने गर्छन् । यसरी विदेश जाने सुर गर्दा नेपालमा नै अनेकौं दुःख झेल्नुपर्छ भने विदेशमा पनि थुप्रै समस्या आइपर्छन् । त्यसो भए विदेश जानेले के–के कुरा बुझ्न आवश्यक छ त ? क) उमेर र विवरण १८ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा मात्र वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । रोजगारीमा जा ...
कुबेत भन्दै दुबई पुर्‍याइएका १२ नेपाली महिलाको उद्धार
अवैधानिक रुपमा भारत हुँदै दुबई पुगेका आज १२ जना महिला कामदार आज फिर्ता भएका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर दुबई पुर्‍याइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कुबेत जान भनेर हिँडेका महिलालाई दुबईबाट उद्धार गरेर नेपाल फर्काइएको हो । उद्धार गरिएका महिलाहरु बर्दिया, महोत्तरी, भक्तपुर, धनकुटा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, मोरङ लगायत जिल्लाका हुन् । उद्धार गरिएका क ...
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले औपचारिक प्रणालीबाट स्वदेशमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो । ‘हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कामदारहरुको लागत घटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकको गत असोजमा प् ...
‘छोरा बचाउन म बुढीले कहाँबाट ल्याउँ ४५ लाख ?’
नवलपरासीको मदननगरका थानेश्वर भुसाल ४ वर्षदेखि साउदी अरवको जेलमा बन्दी जीवन विताइरहेका छन् । साउदीमा थानेश्वरले चलाएको गाडीले सडक दुर्घटनामा दुई जानको ज्यान गएपछि उनी जेल परेका थिए । अब ४५ लाख रुपैयाँ ‘ब्लडमनी’ दिन सके उनी छुट्छन्, नभए उनी जेलमै रहनेछन् । भुसाल परदेशको कालकोठरीमा जति पीडा भोग्दैछन्, त्योभन्दा ठूलो पीडा यो वृद्धहरु मात्रै रहेको परिवारलाई परेको छ । यो परिवारलाई व ...